कामचोर ठेकेदारको खोजीमा गृहमन्त्री, सत्तामै रहेका कामचोर ठेकेदारतिर भने आँखा गएन ।। « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
कामचोर ठेकेदारको खोजीमा गृहमन्त्री, सत्तामै रहेका कामचोर ठेकेदारतिर भने आँखा गएन ।।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ‘कामचोर’ ठेकेदारहरुको खोजीमा छन् । जिल्ला–जिल्लाबाट सूची मगाएका उनी आजभोलि जहाँ पुग्छन्, ‘कामचोर’ ठेकेदारहरुलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिन छाड्दैनन् । तर, प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दलकै रोमा बसेका कामचोर ठेकेदारतिर भने उनको आँखा परेको छैन । हो, ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण प्रसाद रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् । संघीय फोरम अहिले सरकारमा छ । उनै रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सडक विभागका अधिकारीहरुले सडक र पुलको ‘ऐंजेरु’ भन्ने गरेका छन् ।
किनकी पुप्पु कन्स्ट्रक्सनले ‘लोएष्ट बिडर’ बनेर सडक तथा पुलको ठेक्काहरु हात पार्छ र कहिल्यै तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्दैन । ‘पप्पुलाई बेलैमा काम भएन भनेर कारवाही गर्ने चेतावनी दिनै हुन्न, अदालत पुगेर स्टेअर्डर ल्याइहाल्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘पावरवाला सांसदको कम्पनी भन्ने भएपछि त झन् डिभिजनका हाकिमहरु पप्पुविरुद्ध बोल्दै बोल्दैनन् ।’ भर्खरै उनको पार्टी फोरमका सांसद मो. इस्तियाक राइन शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । त्यसैले सडक विभागमा चर्चा छ, ‘अब ऐँजेरु भवनतिर पनि सर्ने भयो ।’
कम्पनी बेचें भन्दै झूटो प्रचार………….
पप्पुको मुख्य कार्यालय वीरगञ्जमा छ । सांसद भएपछि ठेकेदार सांसद भन्न थाले र उनको आलोचना भयो । त्यसबाट बच्न उनले कम्पनी बेचेको दाबी गर्छन् । उनले वीरगञ्जकै सुमित रौनियारलाई कम्पनी बेचेको बताउछन् । तर बुझ्दै जाँदा सुमित रौनियार उनकै छोरा रहेछन् । सडक विभागको तथ्यांकअनुसार सडकका अधिकांश पुलको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले हात पारेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर उनी सबैभन्दा कम बोलकबोलसहित टेण्डर हाल्छन् । सडकका हाकिमहरु पनि उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर क्रस गर्ने आँट गर्दैनन् र पप्पुले ठेक्का पाउँछ । तर, जब ठेक्का पाएर १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खल्तीमा पर्छ, पप्पुले काम गर्न छाड्छ ।
यस्तो छ पप्पुको खराब रेकर्ड………….
सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाउनु पर्ने सबै पुलको लम्बाइ जोड्ने हो भने सात किलोमिटर नाघ्छ । काठमाडौंको तीनकुनेको पुल होस् वा टेकु र कालिमाटीलाई जोड्ने पुल होस्, पप्पुले नै ठेक्का पाएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पर्सामा नौरन्जीया, तिलाव, बेदाहा र हेरियाडी नदीमा पुल बनाउँदैछ । यसमध्ये नौरन्जीया र तिलाव ०७० सालमै सक्नुपर्ने थियो भने बेदाहा र हेरियाडीको निर्माण ०७३ मै । तर, अझै काम सकिएको छैन । रौतहटमा निर्माण हुँदै गरेको चाँदी नदी पुलको म्याद आगामी असारमा सकिँदैछ । तर, भौतिक प्रगतिले भने पुल बन्न अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । रौतहटकै लमाहखोला र तरहरा झाँद्ध नदीपुल पनि म्याद गुज्रिसकेको छ । रौतहटको बाग्मती नदी पुल पप्पुकै जिम्मामा छ । आगामी असारमा सक्नुपर्ने पुलको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको विभागमा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग अहिले १० अर्ब बढीको ठेक्का छ । तर, कुनै पनि काम न समयमा भएको छ र प्रगति सन्तोषजनक छ । बरु कामको गुणस्तरीयतामाथि पटक–पटक प्रश्न उठेको छ । कञ्चनपुरको औरही पुलको पनि हालत उस्तै छ । यो पुल गत वैशाखमा नै बनिसक्नुपर्थ्यो । जिल्लाको दाईजीखोला पुलमा पनि पप्पुले यस्तै लापर्वाही दोर्होयाएको छ । यो पुल ०७४ को पुसमै निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरीलगायतका जिल्लामा पनि पुलका ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । हुलाकी मार्गमा पर्ने झापाको कन्काई पुलको निर्माणमा पनि पप्पुको लापरवाही कायमै छ ।
२०७२ जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण सक्नुपर्ने पुल अझै बनिसकेको छैन । पुलसँगै सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कम्पनीले पर्साको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह–परवानीपुर सडकसहित दुई वटा खण्ड निर्माणको ठेक्का पनि लिएको छ । हुलाकी राजमार्गको एउटा खण्डमा डेढ अर्बको ठेक्का पनि पप्पुकै जिम्मामा छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग अहिले १० अर्ब बढीको ठेक्का छ । तर, कुनै पनि काम न समयमा भएको छ र प्रगति सन्तोषजनक छ । बरु कामको गुणस्तरीयतामाथि पटक(पटक प्रश्न उठेको छ ।
सबैभन्दा धेरै लापरवाही पुलमा……………
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार पप्पुले सबैभन्दा धेरै लापर्वाही पुलमै गरेको देखिन्छ । गत असारमा बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल उदघाटन नहुँदै भत्कियो । यो पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले साढे १६ करोड बढी लागतमा बनाएको थियो । यसको निर्माणमै गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए । तर त्यसलाई रोक्न कसैले सकेन । ‘कोही आफूविरुद्ध बोल्यो भने पप्पुले मुख थुन्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै लगाउँछ,’ एक अधिकारीले भने, ‘जतिसुकै दबाव बनाउँदा पनि यो कम्पनीले समयमै काम गर्दैन ।
एउटा न एउटा समस्या देखाएर काम अल्झाउँछ । गरेको काम पनि टिकाउ हुँदैन ।’ तर, पप्पुले समयमा काम गर्दैन र उसको कामको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेको छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि लो बिडका कारण एकपछि अर्को ठेक्का ‘अवार्ड’ जसरी पड्काइरहेको छ । ‘काम हुँदैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि कम रकम कबोल गरेकै कारण उसलाई ठेक्का नदिई सुखै छैन,’ विभागको एक अधिकारीले भने । विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम लापर्वाही गरेरै समयमै काम नगर्नेहरुको ठेक्का तोड्न अभियान चलाउने बताउँछन् । ‘अब संस्थागत रुपमा नै एउटा मापदण्ड बनाएर ठेक्का तोड्छौं,’ उनले भने, ‘कुनै एउटा कम्पनी विशेषविरुद्ध भन्दा पनि यो अभियान वातावरण सहज हुँदा(हुँदै पनि काम नगर्ने्विरुद्ध हुनेछ ।’
नेपालगञ्जको राँझादेखि जमुनाहसम्म साढे १० किलोमिटर सडकमा ठूला–ठूला खाल्डा परेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ४ करोड बढी जरिवाना तिराएको उनले बताए । उक्त सडक तोकिएभन्दा दुई वर्ष ढिलो निर्माण भएको थियो । कालिका कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको कोहलपुर(राँझा सडक तोकिएको म्यादभन्दा आठ महिनाअघि नै हस्तान्तरण हुँदा पप्पुलाई भने दुई वर्ष समय थप्नुपरेको थियो । सडकको काम गुणस्तरीय नभएपछि पप्पुले इतिहासमै पहिलोपटक काम नराम्रो भएको स्वीकार गरी जरिवाना तिरेको थियो ।
पप्पुले नै जिम्मा लिएको बर्दिया गुलरियाको बैदीचोकदेखि मगरागाडी जोड्ने सडकको काम पनि विवादित बनेको थियो । पप्पुले रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल ०७४ सालमा दोस्रो पटक भासियो । पूर्वी पिलर भासिएको एक वर्षपछि पश्चिमतर्फको पिलर पनि भासियो । पप्पुले बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै पुल भाँचिएको थियो । त्यसमा कम्पनीको जिम्मेवारी नहुने बताउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पप्पुकै पक्षमा फैसला आयो ।।onlinekhabar